कुन महिनामा जन्मिएका मान्छेहरु हुन्छन् कति भाग्यमानी ? | सुदुरपश्चिम खबर
कुन महिनामा जन्मिएका मान्छेहरु हुन्छन् कति भाग्यमानी ?
हरेक व्यक्तिमा आफू कस्तो स्वभावको छु भनेर जान्ने इच्छा हुन्छ। आफ्नो मात्रै नभएर आफ्ना नजिकको साथीभाई, आफन्त र प्रेमीप्रेमिका कस्तो स्वभावका छन भनेर जान्नेहरु पनि उत्तिकै हुन्छन। कतिपयले वैवाहिक जीवन अगाडी म कस्तो युवा÷युवतीसँग जोडिदै छु भन्ने कुरा बुझ्न खोज्छन।
बिश्वास नै गर्न नसकिएका कतिपय ज्योतिष शास्त्रका विषय हामीसँग मिल्न जान्छ। ज्योतिष शास्त्रानुसार कुन महिना जन्मिएका मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसरी वर्णन गरिएको छ।
बैशाखः बैशाख महिनामा जन्मिएका मानिसहरू मृगका जस्ता नयन भएका हुन्छन। कर्मशील, आकर्षक भएका हुन्छन्। उनीहरुको दिल ठूलो हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रानुसार बैशाख महिनामा जन्म लिनेहरु सूर्य भगवानको कृपाले गर्दा सधै साहसी र भाग्यमानी हुन्छन्। सुनमा सुगन्ध भनेझै कला, साहित्यमा रुचि राख्ने उनीहरुलाई व्यापार व्यवसायबाट राम्रो लाभ हुन्छ।
लापरवाही गर्ने बानिको कारण उच्च सफलतामा समस्या देखिन्छ। घमण्ड नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। प्रेम गरेका व्यक्तिलाई सोचेभन्दा बढी माया गर्ने यिनीहरुको जीवन सुखमय बित्छ।
जेठः ज्योतिष शास्त्रानुसार जेठ महिनामा जन्मनेहरु बुद्धिमान, मिजासिलो, दिर्घायु र धनवान हुन्छन। परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने यिनीहरु घरमा भन्दा प्रदेशमा खुशी हुन्छन। बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरी सजिलै नाम र खुशी आर्जन गर्ने हुनाले उनिहरुहरुको जीवन इच्छा अनुसार चल्छ। धर्मप्रतिको गहिरो आस्था र बिश्वास गर्ने हुन्छन्।
मिलनसार हुने हुँदा जता गए पनी छिट्टै साथी बनाउछन । साथिको सहयोगले सफलता शिखर छुन सक्छन। शारीरिक रुपमा बलिया देखिए पनि यिनीहरुको स्वास्थ्य स्थिति भित्री रुपमा कमजोर हुन्छ। खानपानमा ध्यान दिनपर्छ। प्रायः आफ्नै तालमा रमाउने यिनीहरु अरुलाई हुकम लगाउने स्वभावका हुन्छन।
म जस्तो कोहि छैन, मैले गरेको सबै ठिक अरु गलत भन्ने भएकाले यिनीहरुसँग कोही पनि लामो समय टिक्न सक्दैनन्। सफलता छिट्टै हात पार्ने यिनीहरु असहायलाई सहयोग गर्ने स्वभावका हुन्छन। वैवाहिक जीवन निकै रोमान्चित हिसाबले बिताउँछन।
असारः सकारात्मक सोच भएका यिनीहरु मेहनति र सुन्दर अनुहारका साथै धर्ममा बिश्वास राख्ने हुन्छन। ज्योतिष शास्त्रानुसार धन नास हुनाले यिनीहरु पीडित हुन्छन । नयाँ–नयाँ ठाउँ घुम्न रुचाउने यिनीहरु साहित्य, संगीतमा रुचि राख्छन।
स्वतन्त्रताका पक्षमा लड्ने यिनीहरु कुनै दबाबमा काम गर्न रुचाउँदैनन्। धैर्यतालाई पालना गर्ने खालका हुन्छन। परिवारका सदस्यको विषेश ख्याल गर्ने यिनीहरु आफ्नो पनि उत्तिकै ख्याल गर्ने हुन्छन। मीठो खाने, राम्रो लगाउने इच्छा राख्ने गर्छन। वैवाहिक र प्रेम जीवन सुखमय बिताउन सक्ने यिनीहरुको दिल सफा हुन्छ।
साउनः ठूलो शरीर यिनीहरु भएका, शालिन स्वभावका हुन्छन। ज्योतिष शास्त्र अनुसार यिनीहरुको जीवनमा दुःख, कष्ट, सुख, सन्तोष बराबर हुन्छ। धन राशि हुँदा पीडित देखिए पनि परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने हुन्छन। गित, संगीत, कला, साहित्यको बिधामा नाम कायम गर्न सक्छ्न। आफू इमान्दार भएका यिनीहरु अरु पनि आफू जस्तै होउन् भन्ने चाहन्छन्।
परिस्थिति सधै अनकुल नहुने हुँदा दुःखी हुन्छन। विलासी जीवन बिताउने शोख भएका यिनीहरु अर्काको कुरा सुन्दैनन्। पैसाको लागि इष्ट मित्र, साथिभाई सबैलाई बिर्सन्छन। मायाप्रेमको बिषयमा खेलाडी जस्तो स्वरुप देखाउने यिनीहरुको वैवाहिक जीवनमा खटपट आइरहन्छ। मपाँइत्व बढी भएका यिनीहरुलाई अर्काले प्रशंसा गरिदिए मख्ख पर्छ्न।
भदौः महत्वाकांक्षी, दयालु र सरल स्वभावका हुन्छन। व्यवसायक चेत उच्च भएका हुनाले ठुलो लाभ लिन सक्छ्न। विदेशमा व्यवसाय विस्तार गरे पनि साथीभाईको सहयोग, माया पाउँछन्। संघर्ष र मेहनतले गर्दा सुखमय जीवन बिताउन सफल हुन्छन्।
यिनीहरु हँसिला र कोमल मनका हुन्छन। त्यसैले दिन दःखीको सहयोगमा खटिन्छन। मीठो बोलिको प्रभावले सबैले यिनीहरुलाई प्रेम गर्छन। भदौ महिनामा जन्म लिनेहरुमा चाडै रिसाउने शंका गर्ने बानी हावी हुन्छ। आत्माविस्वास बलियो हुदैन।
असल र खराब छुट्टाउन नसक्ने हुनाले धोका खान्छन। भावुक हुने यिनीहरु चाडैं माया प्रेमको जालमा पर्छन। इमानदारी र मिल्ने जीवन साथी प्राप्त गर्ने हुँदा जीवन बिताउन सजिलो हुने ज्योतिष शास्त्रमा बताइएको छ।
असोजः कर्तव्यबोध गर्ने स्वभाव भएका यिनीहरु धनवान र सौभाग्यशाली हुन्छन। कल्पनाशील जीवनमा कला, साहित्य, नृत्यमा रुचि राख्ने खालका हुन्छन। आकर्षक सौन्दर्य भएका, मधुर मन भएका यिनीहरु कम बोल्ने हुन्छन्।
सफा मन भएका यिनीहरुलाई परोपकारी कामले समुदायमा उच्च स्तरमा पु–याउँछ। शान्त आदत भएका यिनीहरु अर्काको मनको कुरा बुझ्छन। रमाइला भएका कारण जीवनसाथी, साथीभाई, घरपरिवारलाई खुसी राख्छ्न। माया प्रेमलाई इमान्दारिता पूर्वक कर्तव्य निभ्याउने हँुदा प्रेमीलाई खुसी राख्छ्न। परिस्थिति अनुसार निर्णय लिने यिनीहरु रिसाउदैनन।
कात्तिकः धनवान, परिश्रमी तर निर्णय क्षमता कम भएका हुन्छन। अरुको कुरा सुनेर अगाडि बढ्ने हुँदा असफल हुन्छन। निरन्तर असफल हुँदा पनि आत्माविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ तर पनि हार मान्दैनन्। घमण्डले गर्दा समूदायमा मिल्न सक्दैनन्। अजिव स्वभावका यिनीहरु आकर्षित शरीर भएका हुन्छन्।
मंसिरः भाग्यशाली, घनिष्ट, परोपकारी हुन्छन। सादाजीवन जिउने यिनीहरु भलाद्मी स्वभावका हुन्छन। जिद्दीपना भए पनि धन आर्जन भने सजिलै गर्छन। खर्चालु हुने हुँदा बचत गर्न सक्दैनन् त्यै पनि आर्जित सम्पत्ति प्रयोग गरि सुखद जीवन बिताउछन। स्वतन्त्रता जीवन जिउन चाहाने यिनीहरु आफ्नै पारामा काम गर्न रुचाउँछन्। आकर्षक जिउडाल भएका हुन्छन्।
ब्यबस्थापन मिलाउन सक्ने यिनीहरुलाई नेतृत्व गर्न कठिन पर्दैन। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हाँसीहाँसी सामना गर्ने क्षमता यिनीहरुमा हुन्छ। नकारात्मक पक्ष भनेको जिद्दी स्वभाव, अहंकारीपन हो रिस नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। मायाको मामिलामा उतरचढाप झेल्नुपर्छ। एकपटक हृदयबाट प्रेम गर्न थालेपछि आफ्नो कर्तव्य नभुल्ने यिनीहरुले अथाह प्रेम गर्छन।
पुसः साहसी कार्य गर्ने, आँटिला, जोसिला र महत्वाकांक्षी हुन्छन। सुख भोग गर्न मन पराउछन। सफा मन भएका यिनीहरु कर्ममा विश्वास गर्छन। समूदायमा प्रतावी कर्मले सम्मान मिल्छ। साँचो र स्पष्ट किसिमका हुन्छन। सहासिक यात्रा गर्न, घुम्न मन पराउछन। वैवाहिक जीवन सुखमय र अरुको भलाइमा पृथक हुन्छन। मिडियाकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्ता पेसामा सफल हुन्छन्।
माघः बौद्धिक क्षमता भएका हुन्छन साहित्यमा रुचि राख्छन। जिद्दीपना र रुखो बोली हुन्छ। झ्वाट्ट हेर्दा निर्दयी देखिए पनि अरुको कुभलो चिताउदैनन्। बढी बोल्ने हुँदा विवादित बन्छन। नेतृत्व गर्ने क्षमता रहन्छ। इच्छा शक्ति बलियो हुन्छ। व्यापारबाट लाभ लिन्छन। रमाइलोको लागि खर्च गर्छन प्रेम अटुट गर्ने स्वभावका हुन्छन्।
फागुनः फागुन महिनामा जन्म लिनेहरु तृष्ण बुद्धि भएका हुन्छन। मिलेको गोरो अनुहार भएका हुन्छन। धर्म, कर्ममा अत्यन्तै रुचि राख्छन। प्राय समय वैदेशिक यात्रामा बिताउछन। क्षमता प्रयोग गरेर जिम्मेवारी निभ्याउछन। प्रेममा बढी तृप्त, मोजमस्तीमा रमाउने खालका हुन्छन। कुलतबाट टाढा बस्नु राम्रो हुन्छ। दोधारेपनले गर्दा समस्या आउछ। जीवनमा ठूलो आर्थिक संकट आउदैन। दिलदेखि माया गर्ने हुँदा प्रेम र वैवाहिक दुबै जीवन सुखमय बित्छ।
चैत्रः ज्योतिष शास्त्रानुसार चैत्र महिनामा जन्म लिनेहरुको उच्च बौद्धिक क्षमता हुन्छ। सुन्दर मुहार कृति भएका यिनीहरु हँसिला हुन्छन। रिसाहा र अहंकारी स्वभावका हुन्छन। रचनात्मक क्षेत्रमा बिशेष रुचि राख्छन। बिलक्षण प्रतिभाका यिनीहरु परिवारको बढी ध्यान राख्छन्। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)
यी ८ फलफूल र तरकारीले तीब्र रुपमा घटाउँछ तौल !!
हामी झुट किन बोल्छौं ?